healthtips Archives - Khabar Japan - News in Nepali
तपाई यहा हुनुहुन्छ » ख़बर जापान / healthtips
ग्यास्ट्रिक के हो र यसबाट कसरी बंच्ने ?
Tags: alert-news, gastric, healthtips, in-focus, remedy
खबरडेस्क,११ चैत । पेट दुख्ने, पोल्ने, अम्लपित्त बढ्ने आदि लक्षणयुक्त समस्याको चिकित्सकीय नाम ग्यास्ट्राइटिस हो। छाती र पेटको बीचको खाल्टो वरिपरि दुख्नु, पेट पोल्नु, भोक हराउनु, अम्लपित बढ्नु, मुख बिग्रिनु, पेट भारी हुनु, आपन वायु बढ्नु, रिंगटा लाग्नु, टाउको दुख्नु,… बाँकी अंश »
गर्मीमा केशको सुरक्षा कसरी गर्ने ?
Tags: alert-news, health, healthtips, in-focus, protectinghair, summer
खबरडेस्क,१० चैत । गर्मीमा हेयरवास नियमितजसो गरिन्छ, जसले गर्दा केश सुख्खा हुन्छ । केशलाई सुख्खा हुन नदिन माइल्ड स्याम्पु प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । – केश धोएपछि कन्डिसनरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ । – घाममा निस्कदा केशलाई स्कार्फले छोप्नुपर्छ वा छाता… बाँकी अंश »
काखीको कालोपन यसरी हटाउने
Tags: armpit, blackness, health, healthtips, in-odd, removingblack
खबरडेस्क,३ चैत । केही घरेलु उपाय अपनाएर काखीको कालोपन हटाउन सकिन्छ। – टुक्रा पारिएको कागतीले करिब १५ मिनेट काखीको मसाज गरे कालोपन हट्दै जान्छ। – चिनी र पानीको मिश्रण बनाएर दिनमा दुई पटक काखीमा लगाउँदा कालोपन हट्छ। – वेकिङ सोडा… बाँकी अंश »